Entana I2P ho an'ny Debian
Ny entana Debian dia voatsara ary tokony>/em> handeha amin'ny fitaovana x86/x86_64 mampiasa:
Ubuntu (Precis 12.04 sady vaovao)
Ny entana I2P metyhandeha amin'ny fitaovana tsy voalaza eo ambony. Azafady manaova tatitra amin'ny tsy fihetezana hita amin'ireo entana ireo ao amin'ny Trac at https://trac.i2p2.de.
Tetika 1: Modely taty aoriana an'i Ubuntu sy ny sampany (Andramo ity raha tsy mapiasa Debian ianao)
Tetika 2: Debian (miaraka amin'ny sampan'i Debian)
Fanampiana ny PPA avy amin'ny command line ary mametraka ny I2P
Sokafy ny terminal dia ampidiro:
Ity baiko ity dia hanampy ny PPA ao amin'ny /etc/apt/sources.list.d ary hisintona ny fanalahidy gpg izay nosoniavin'ny toeram'pitahirizana. Ny fanalahidy GPG dia manamarina fa ny entana dia tsy nisy niova hatramin'ny nanamboarana azy.
Hilazao ny mpitsinjara entan'ny PPA vaovao amin'izao fomba izao:
Ity baiko ity dia hisintona ny lisitry ny fampiarana farany avy amin'ny toeram-pitahirizana izay efa vonona ao amin'ny fitaovanao, miaraka ny PPA an'ny I2P izay efa nampiana teo aloha.
Vonona ianao izao hametraka an'i I2P!
Fanampiana ny PPA amin'ny fampiasana ny Synaptic
Vao misokatra ny Synaptic, fidio Repositorieseo amin'ny Settingsmenu.
Rehefa misokatra ny Synaptic, dia fidio Repositories avy eo amin'ny Settings menu.
Tsindrio ny loharanon'entana hafa tab ary click Ampio. Araiketoppa:i2p-maintainers/i2p ao anaty ny andalan'ny APT dia tsindrioAmpio loharon'entana. Tsindrio Hidio ny bokotra ary Avereno ampiakarina.
Ao anaty vata fanasarahana, ampidiro ny i2p dia tsindrio enter. Rehefai2pno hita eo amin'ny valiny, tsindry havanana i2pdia fidioMariho ho apetraka. Rehefa vita izay dia mety ahita soaratra mivoakaAsiana fanampiny?. raha izay, tsindrio MarihoaryApetraho.
Rehefa vita ny ny fametrahana dia afaka mandroso any amin'ny fandaharana manaraka izay ao anatin'nymamelona an'i I2Pary mandamina azy hifandahatra amin'ny fitaovanao.
Toromarika hoan i Debian
Hilazao ny mpitsinjara entan'ny PPA vaovao amin'izao fomba izao
Ity baiko ity dia hisintona ny fampiarana farany avy amin'ny fitehirizan'entana rehetra hita anaty fitaovanao, miaraka ny fitehirizana an'i I2P izay natao teo amin'ny ambaratonga 1.
Vonona ny hametraka an'i I2P ianao! mametrakai2p-keyring ny entana rehetra dia manamarina fa ho voarainao ny fanavaozana rehetra ao amin'ny fitehirizana ny fanalahidy GPG.
Rehefa vita ny fametrahana dia afaka mandroso ao amin'ny ambaratonga manaraka toy ny mamelona an'i I2Pary mandamina sy mampifandrindra azy amin'ny fitaovanao.
Raha ireo entana I2P ireo no ampiasaina, dia afaka velomina torak'izao ny router I2P fomba telo:
"raha ilaina" ny mampiasana ny script'ny router i2p. dia alefaso "i2prouter start"avy amin'ny baiko an-tsoratra. (fanamarihana: Aza mampiasa sudo na mandefa azy raha root ianao!)
"raha ilaina" tsy misy ny java service wrapper (izay ilaina amin'ny fitaovana tsy mampiasa linux/na fitaovana tsy x86) amin'ny alalan'ny fandefasana "i2prouter-nowrapper". (Note: aza mampiasa sudo raha root ianao!)
Servisy velona miaraka amin'ny solon'tsaina ,ary alohan'ny hidiranao ao anaty ny solon'tsainao koa aza. Ny servisy dia azovelomina amin'ny "dpkg-reconfigure i2p" raha root na mampiasa sudo. Hafatra momba ny fampiasana azy.
Rehefa mametraka ny i2p amin'ny voalohany, tadidio nymanamboatra ny NAT/rindrin'afon raha hainao. Ny port izay ho tondroina dia hita ato amin'ny pejy fanamboarana ny tambazotra ao anaty fibaikona ny router. Raha ilaina ny fanoroana momban'ny fampiasana ny port, dia jereo ny portforward.com.
Azafady jereo ary amboary ny salan'ny bandwidtheo amin'nypejy fanitsiana, mba ho 96 KB/s down / 40 KB/s up, izay hita fa antonony.